Multnomah County Elections Assists Voters - Somali | Multnomah County
Isniin Abriil 12, 2021
Xiriirrada: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)
Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay kaa taageeri karaan sidaad u qorsheysan lahayd inaad CODAYSO bishan Maayo!
Doorashada xigta ee Degmada Multnomah waa Doorashada Degmada Gaarka ah ee bisha Maayo 18, 2021. Doorashadan waxaa ka mid ah loolanka loogu jiro jagooyinka guddiga dugsiga xaafaddaada, kulliyadda bulshada, adeegga waxbarashada degmada, adeegga dabdamiska degmada ee miyiga iyo adeegga biyaha degmada. Iyada oo ku xidhan goobta aad ku nooshahay, waxaad warqadaada codbixinta ka heli kartaa mid ama in ka badan oo kamid ah tartamadan. Waxaad sidoo kale heli doontaa ugu yaraan hal cabbir warqad codbixineed. Dhammaan codbixiyayaasha Degmada Multnomah waxay u heli doonaan waraaq codbixineed doorashadan. Waraaqaha codaynta waxaa la bilaabi doonaa in boosta lagu soo diro Abriil 28.
Haddii aad tahay codeeye u baahan caawimaad, waxaad geli kartaa khadka, wici kartaa, iimayl udiri kartaa ama aad booqan kartaa Goobta Doorashooyinka Degmada Multnomah si aad caawimaad uga hesho talaabo kasta oo hanaanka Doorashooyinka ah oo ay ka mid yihiin: isku diiwaangelinta codeynta, sameynta ama akhrinta buugga cod bixinta, cusbooneysiinta macluumaadka diiwaanka cod bixiyaasha, fahamka shuruudaha Doorashooyinka iyo talaaboyinka codeynta ama caawimaad kasta oo kale oo la xidhiidha Doorashooyinka.
Doorashooyinka dawladaha hoose waa muhiim. Samayso qorshe si aad u CODAYSO Doorashooyinka bisha Maayo!
Kahor waqtiga kama-dambaysta ah ee Maalinta Doorashooyinka ee 18-ka Maayo, Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay weydiisaneysaa cod-bixiyeyaasha inay Sameeyaan Qorshe ay ku CODEEYAAN! Liiska diiradda la saaray ee codeeyayaasha waxay marayaan shan laabo si loo xaqiijiyo in codkooda la tiriyay:
Is duwaan Geli Si AAD U CODAYSO.
Warqadaada codaynta hel.
KURID warqadaada codaynta.
Soo celi warqadaada codaynta.
Doorashooyinka dawladaha hoose waa muhiim. Hubi codkaaga in la tiriyay!
Caawimaada Cod Bixiyeyaasha Ayaa Loo Heli Karaa Codbixiyeyaasha Naafada Ah
Waxaad saaxiib, xubin qoys, ama qof kale oo aad garanayso oo aaminsan tahay ka codsato kartaa inuu kaa caawiyo codaynta. Haddii loo baahdo, waxaad wici kartaa oo ka codsan kartaa caawimaada la xiriirta Doorashooyinka Waaxda Doorashooyinka Degmada Multnomah. Kooxaha Caawinta Codbixiyaasha ee Doorashooyinka waxay cod bixiyaasha ku caawin karaan guryahooda, goobaha ay ku nool yihiin, ama goobta adeega Doorashooyinka Koofur Bari Portland ama Gresham. Taageeradani inta badani waa bilaash. Sharci ahaan, shaqaalaha ama wakiilada guud ma bixin karaan caawimaada cod bixinta. Shaqaalaha Laanta Doorashooyinka ee Degmada Multnomah waxay raacayaan dhamaan talooyinka badqabka ee ay bixisay Xarunta Kahortaga iyo Xakamaynta Cudurada (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
Taageerada Doorashada Waxay Sidoo Kale Diyaar ku Tahay Luuqadda Codbixiyuhu Doorbidayo.
Waxaad sidoo kale taageero codbixinta ku codsan kartaa luuqaddaad doorbidayso. Laanta Doorashooyinka ee Degmada Multnomah waxay leedahay shaqaale laba luuqadleyaal ah oo ku hadla luuqado badan. Laanta Doorashooyinku waxay sidoo kale u diyaarin doonaan turjubaan, bilaash ah, cid kasta oo u baahan in laga caawiyo codbixinta ama nidaamka doorashooyinka ayadoo la adeegsanaayo luuqad aan Ingiriisi ahayn. Turjumista taleefanka ama hab muuqaalka ah ayaa lagu heli karaa luuqad kasta oo ay ku jirto Luuqad Ishaareedka Maraykanka (American Sign Language, ASL).
Wakhtiga Kama Danbaysta ah ee Isdwaangalinta Codbixintu Waa Abriil 27.
Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay cod bixiyaasha xasuusinaysaa in Abril 21 keeda, 2021 tahay maalinta ugu danbeeysay ee isku diiwaangelinta cod bixinta Doorashooyinka Gaarka ah ee 18 ka Maayo. Cod bixiyayaasha cusub ee Oregon waxay isku duwaan gelin karaan liisanka gaadhiga, ruqsada wadista gaadhiga ama Aqoonsiga onlayn ahaan oregonvotes.gov/register. Haddii aadan haysan Liiskanka Oregon ee baabur wadida, ruqsada wadista gaadhiga, ama kaadh aqoonsi, ama ay kaa dhaceen, waxad u bahantahay inaad buuxiso warqada kaadhka Diwaangalinta codbixiyaha Oregon ee laga heli karo xafiiska boostada US, goobaha Maktabaddaha Degmada Multnomah iyo Dhismaha Doorashooyinka Duniway‑Lovejoy ee Degmada Multnomah.
Hadii aad horay iskugu diwaanglisay inaad codayso, waxan kaa codsanaynaa inaad hubiso ciwaankaaga iyo magacaaga inay ka cusbooneysiisan yihiin kaydka diwaangalinta codeeyaha. Cod bixiyayaasha waxay macluumaadkooda si onlayn ah u gelin karaan oregonvotes.gov/myvote ama Kaadhka Diiwaangelinta Codbixiyaha Oregon.
Furo adeegga La Soco Warqadaada Codaynta
Adeegeena La Soco Warqadaada Codaynta waxaa hadda lagu heli karaa luuqado badan! Waxaad dooran kartaa inaad ogaysiisyada warqadda codbixinta ku hesho Ingiriisi, Isbaanish, Fiitnaamiis, ama Shiineys. Isku diiwaan geli maanta adeegga La Soco Warqadaada Codaynta oo hel istiikarka onleenka ah ee "Waan Codeeyay". Fariin qoraal ah, iimayl ama cod wargelin ah ayaa kuu sheegi doona marka xafiiska degmada Doorashooyinka uu boosta kuugu soo diro warqada codaynta, oo marka aad soo celiso inay nasoo gaadhay. Wargelinta ayaa sidoo kale muujinaysa hadii warqada codaynta la aqbalay ama hadii ay u baahan tahay in talaabo dheeraad ah laga qaado. Gudaha fariinta "Aqbalida Codbixinta", codeeyayaashu waxay ka heli doonaan warqada dhajista ah ee "Waan Codeeyay" ee Oregon ee gaar ah oo ay soo dhigi karaan baraha bulshada. Codeeyayaasha Degmada Multnomah waxay isku diwaan gelin karaan inat booqdaan multnomah.ballottrax.net.
Macluumaadka warqadda codbixiyaha maqan
Codbixiyayaasha guriga ka maqnaan doona marki la gaaro ama loo dhawaado Maalinta Doorashada waa inay codsadaan in warqaddooda codbixinta ee dadka maqan loogu soo diro ciwaanka gurigooda ku meelgaarka ah. Si aad u hesho warqada codbixiyaha maqan waa inaad dhamaystirtaa Codsiga arjiga Warqadda codbixyaha maqan. Waxaad ka heli kartaa arjiga iyo warbixin badan oo ku saabsan diiwaangelinta codbixiyaha maqan si onleen ah multco.us/absentee. Sidoo kale waxad kala xidhiidhi kartaa xafiiskayaga elections@multco.us ama (503) 988-VOTE (8683) si aad u hesho wixii caawimo dheeraad ah.
Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah iyo COVID-19
Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay raacaysaa dhamaan talooyinka fayodhawrka ee ay bixisay Xarunta Kahortaga iyo Xakamaynta Cudurada (CDC), oo ay ku jiraan xidhashada maaskarada wajiga iyo tilmaamaha kala fogaanshaha. Waji gashadka ayaa waajib ah marka la booqanayo goobaheena adeega codbixinta. Adeegyada codbixinta badankood waxa lagu dhammaystiri karaa onleen ahaan. Wixii su'aalo ah, fadlan la hadal 503-988-VOTE (8683).
Laanta Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay rabtaa in dhammaan codeeyayaasha ay si fudud u codeeyaan, gaar ah oo masaxbanaan, fahmaan talaabooyinka codaynta, fahmaan shuruudaha codaynta, oo ay ogaadaan in codbixiyeyaasha ay taageero na waydiisan karaan. Xaalka codbixiye kasta wuxuu noqon karaa mid kuwa kala ka duwan annana waxaana halkan u joognaa inaanu bixino kaalmo kasta oo loo baahdo.
Tirada Maalmaha Ka Hadhay Maalinta Doorashad ee Maayo 18
Buug-yaraha Cod-bixiyeyaasha ee loo diray dhammaan qoysaska deeggaanka - Abriil 21, 2021
Wakhtiga kama danbaysta ah ee is diwaangalinta codbixintu waa - Abriil 27, 2021
Waraaqaha codbixinta waxay bilaabayaan in boosta loogu diro codbixiyaasha - Abriil 28, 2021
Xarunta Codbixinta Degdega ee Gresham Ayaa Furmaysa - Maayo 3, 2021
Dhamaan codeeyayaashu waa inay helaan waraaqahooda codaynta. - Bisha Maayo 6, 2021
Maalinta u dambeysa inaad si ammaan ah ugu soo celinayso warqadda cod‑bixintaada boostada - waa Maayo 11, 2021
Maalinta Doorashooyinka - Kaadhadhka codbixinta waxa u danbaysa 8 da fiidnimo ee bisha Maayo 18, 2021
waxay furantahay Bisha Maayo 3 ilaa - Maayo 18, 2021
Xarunta Codbixinta Degdega ee Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah
Official Ballot Drop Sites - Somali
Goobaha Codaynta Rasmiga ah ee 24 Saacadood. Goobaha Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah ee Laybareeriga Degmada Multnomah 24 Saacadood.
Candidate Filing Closes March 18 - Somali
Soo gudbinta Musharixiinta Ayaa xirmaysa Khamiista, Maarso 18 ee Doorashada Gaarka ah ee Degmada oo dhacaysa Maayo 18
Candidate Filing Opens for May 18, 2021 Special District Election - Somali
Isniinta, Febraayo 8, 2021: Ogaysiiska Doorashada: Diiwaangelinta Musharaxiinta ayaa Maanta Furmay Doorashada Degmooyinka Gaarka ah ee Maayo 18, 2021
Multnomah County Elections Is Ready to Assist Voters with Disabilities; Voters Can Also Get Support in Their Preferred Language
If you are a voter who needs assistance, you can go online, call, email or visit a Multnomah County Elections location for support in any step of the voting process.